Marketpple, app kutenga uye kutengesa Apple zvigadzirwa | IPhone nhau
Marketpple, yako yemusangano poindi yekutenga nekutengesa zvigadzirwa zveApple
Iwe unoda here kutenga yechipiri-ruoko iPhone uye usingazive pekutangira kutsvaga? Iwe unoda kutengesa yako yakashandiswa MacBook uye hauzive kuna ani? Zvauri kutsvaga zvinonzi Marketpple, chishandiso cheIOS (hachiwanikwe cheApple) chinoshanda senzvimbo yemusangano kune avo vanoda kutengesa chigadzirwa cheApple uye nevaya vanoda kutenga icho kana chero chimwe chigadzirwa chemapuro.
Asi chii chaizvo chinonzi Marketpple? Seizvo zita rinoratidzira, ndezve iyo 'Apple musika', asi yechipiri-ruoko. Sevhisheni iyi inotiyeuchidza mamwe mashandisiro atinogona kutsvaga zvigadzirwa zvechipiri, tozviwana totenga, asi nemusiyano mukuru wekuti, kana tichifarira kuchinjanisa zvigadzirwa zveApple, muMarketpple hatizotsauswa pakati pezviuru yezvinhu izvo isu zvatisingafarire, asi isu tichaenda takananga kunongedzo kana, panzvimbo pezvo, kuapuro.
1 Marketpple musika wechipiri-ruoko weApple
2 Apple zvigadzirwa padyo nenzvimbo yedu
3 Tumira uye gamuchira zvigadzirwa zveApple usinganetseke nezve iyo logistics kambani
4 Marketpple inopa yakapusa uye isinganetsi chat iwe yaunogona kufungidzira
Marketpple musika wechipiri-ruoko weApple
Iko kushanda kwechikumbiro ichi chekutenga nekutengesa zvigadzirwa zveApple zviri nyore kwazvo. Mushure mekurodha pasi, kuisa uye kutanga iko kunyorera, zvinotikumbira mvumo yekuwana nzvimbo yedu, zvakakosha kana tichida kuwana sarudzo padhuze nesu,; mvumo yekutitumira isu zviziviso, zvakakosha kuti titaure nevashandisi vebasa; uye nick. Ndiko kunyoreswa kwese kwaunotibvunza isu. Kubva pano, tinogona kuita zvimwe zvese.
Pane iyo skrini huru tichaona sarudzo:
Pfungwa, iyo yatingatsanangure sebhodhi rekuzivisa apo zvigadzirwa kubva kuvanhu vakabhadhara kuti vawane kuoneka.
Accessories, uko kwatinozowana kwete chete zvepamutemo zvishongedzo, asi ese marudzi echitatu-bato zvishongedzo senge makesi, mahedhifoni, madhiraivha akaoma kana mairaira
Neiyi nzira, iwe uchave unokwanisa kusarudza chete icho chigadzirwa chinokufarira iwe zvakanyanya kubva kune ese maApple zvigadzirwa uye uone zvakanakisa zvinopihwa zvacho.
Apple zvigadzirwa padyo nenzvimbo yedu
Kana tangowana chero chikamu chakapfuura, tichaona zvinyorwa zviri padyo nenzvimbo yedu, sekureba sekutendera kwatakaita patakatanga kunyorera kekutanga uye ndosaka zvichinzi zvakakosha. Kana tikabata icon pazasi kurudyi, tinogona kunyorera Sefa kunatsiridza kutsvaga: maitiro ekudzora mutengo nekupinza iwo mashoma uye / kana iwo mutengo wakakwira, mune guta ripi ratiri kuda kutsvaga, kana kushambadza kuchifanira kunge kuri, nekugadzirisa kutsvaga nekuburitsa zuva, iri padyo nesu kana mutengo wakaderera. Kana isu tine usimbe, tinogona kugara tichirova pagirazi rinokudza uye kutsanangura kutsvaga mune mashoma matepi atinozoratidza mhando yechigadzirwa, ruvara, chengetedzo, nezvimwe.
Kana imwe sarudzo yatinofarira ikawanikwa ikapinda mairi, tinogona kutanga chat nemutengesi umo matinogona kutenga chinhu kana kutochengeta kuitira kuti panguva iyoyo hatizove nemari inodikanwa, asi tinoziva kuti tichazova nazvo munguva pfupi iri kutevera. Dai isu tisu tanga takaisa kushambadza, chese chataizofanira kuita kumirira kunyorera kuti titumire ziviso yekuti mumwe munhu anoda kudyidzana nesu.
Tumira uye gamuchira zvigadzirwa zveApple usinganetseke nezve iyo logistics kambani
Iyo iyo ingangove inonakidza kana kusiyanisa poindi yeavo vese vari chikamu cheMarketpple ndiko kuendeswa kwemapakeji. Chero chero chinhu kutenga / kutengesa sevhisi inoshandiswa kuisa mutengesi uye mutengi mukutaurirana. Kupera. Kwete kuti izvo zvakashata asi, kana tikazvifananidza neizvo Marketpple inopa, kutenga kwacho kwakachengeteka uye kuri nyore neapp iyi. Imwe yemabhenefiti akakosha ndeyekuti Marketpple ine mari pakuburitsa system pamwe nekuvhura kwepakeji, izvo zvinoita kuti kuve nekuvimba kukuru mukutenga. Pakupedzisira, mutengi anogona kuvhura pasuru kuti aone kana zvese zviri izvo. Kurumidza, nyore uye yakachengeteka.
Kutaura nezvekuchengeteka, Marketpple zvakare ine chimwe chinhu chinonakidza mune izvi. Kusiyana nemamwe masevhisi, hazvidiwe kuti kubhadhara kunoitwa nemaoko kumutengesi kana kuakaundi yako yebhangi, chimwe chinhu chinogona kushandiswa kuita chitsotsi dzimwe nguva. Iyo kubhadhara kunogona kuitwa kuburikidza neapp uye uyu ndiye achaendesa mari kumutengesi, asi kana kamwechete mashandiro ari echokwadi uye apera. Ehezve, kana tichida, vashandisi vakasununguka kusangana nemutengesi pakuendesa / kuunganidza uye kubhadhara neruoko.
Marketpple inopa yakapusa uye isinganetsi chat iwe yaunogona kufungidzira
Kana tangoona chimwe chinhu chinotinakidza, tichagadzirira kutenga. Kana tichigutsikana kuti tinochida, mune mashoma mashoma tichava tatozvitenga. Kana zvisiri, inogara iri pfungwa yakanaka kubvunza rumwe ruzivo mu ... chimwe chinhu senge a tauriranai. Izvo Marketpple inotipa haisi yekungotaura seyavo mune mamwe masevhisi, kwete. Kutaurirana uku kunotimanikidza kufunga nezve zvekunyora uye kuve nehunyanzvi hwekupa mufananidzo wakanaka kune mumwe munhu watisingazive, izvo zvingangodaro zvisinganyadzise vanhu. Iyo chat yekushandisa iyi inotipa isu zvinotevera zviito, zviripo kungobata kure kure:
Kumbira ruzivo. Izvi zvinogara zvichikosha kana tisinganzwisise nezve izvo zvinopihwa.
Ita Chipo. Kunyangwe mutengo uchinge watove kuiswa mune kushambadza, tinogona kugara tichitsvaga zvishoma. Iyi sarudzo ichabatsira avo vanonyara vane nguva yakaoma kukumbira kudzoserwa.
Ndinoda. Nesarudzo iyi isu tichavhara chaiko kutaurirana.
Zviito nemutengesi. Pano isu tichawana anotevera matanho ekutenga, sekusangana kunotora chigadzirwa kana kutaurirana mutengo wekutumira.
Nekudaro, ini pachangu ndine chishandiso ichi chakamisikidzwa uye chengetwa mufaira rangu re "Zvemari" pane zvinogona kuitika mune ramangwana Ini ndiri mumwe wevashandisi vanoona zvakaoma kutenga kana kutengesa kune vamwe vashandisi pamhepo. Kunyangwe Marketpple ichauya inobatsira kana, semuenzaniso, ivo vatangisa a iPhone 8 groundbreaking uye handina wandinozivana naye anoda kutenga yangu iPhone 7 Plus, nekuti ini ndinogona kugara ndichitengesa kuna Apple asi nemutengo unosetsa.
Ndeupi chigadzirwa cheApple chaungatenge kana kutengesa paMarketpple?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Marketpple, yako yemusangano poindi yekutenga nekutengesa zvigadzirwa zveApple
Yu-Gi-Oh! Duel Links ikozvino yave kuwanikwa muUnited States neCanada
Apple inowedzera hukuru hukuru hweApple TV maapplication kusvika ku4 GB